Wasaaradda Gaadiidka oo Iska Difaacday Eedo Masuul ka tirsan Xisbiga WADDANI u soo Jeediyey | Hayaan News
Wasaaradda Gaadiidka oo Iska Difaacday Eedo Masuul ka tirsan Xisbiga WADDANI u soo Jeediyey
Hargeysa(Hayaannews)-Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somaliland ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay jawaab ka bixiyeen hadal ka soo yeedhay masuul ka tirsan xisbiga WADDANI oo naqdiyey hawlaha wasaaraddasi.
Sidaasna waxa lagu sheegay War-saxaafadeedkaasi oo uu ku saxeexnaa Afhayeenka Wasaaradda Gaadiidka Ismaaciil Cali Axmed oo Nuqul ka mid ahi soo gaadhay Shabaada Wararka ee Hayaannews, waxaanu u qornaa sidan:-
Dhawaan warbaahinta madaxbanaan waxaa soo gaadhay eedayn ka dhan ah Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka oo uga timid xubin ka tirsan Xisbiga mucaaridka ee Waddani.
Haddaba, sida ku cad Qodobka 94 ee Dastuurka Somaliland, iyo sidoo kale Qodobada 21 iyo 22 ee xeerka kala xadaynta Nidaamka Xukuumadda iyo Hay’addaha Madaxa Bannaan Xeer L/r 71/2015 ayaa qeexay xilka, waajibaadka awooddaha wasiirka.
Sida ku cad Xeerka Wada marista Xeer L/r 56/2013 Q4 farqadiisa 1aad xaraf (x), Golayaasha Deegaanka ayaa awood sharci u leh Ganaaxa Gaadiidka waddooyinka magaalooyinka, sidoo kale Q4 Farqadiisa 3aad xaraf (KH), Wasaaradda Gaadiidka ayaa awood sharci u leh Ganaaxa Gaadiidka waddooyinka ka baxsan Magaalooyinka,Xubintaas, waxaa ka muuqata aqoon-darro sharci iyo maamul iyo Mucaaridnimo cilmi iyo caqli midna aan ku dhisnayn.
Sidaas-darteed ma joogno Somaliland British protectorate ee waxaa fiican in aad aqoon fiican u yeelato shuruucda Dalkaaga.”